Xaalado Nololeed oo heysata dad ku soo barakacay Degmada Matabaan – SBC
Xaalado Nololeed oo heysata dad ku soo barakacay Degmada Matabaan
Iyadoo mudooyinkii ugu dambeeyay ay abaar saameyn buuxda yeelatay ka taagneyd qeybo badan oo ka mid ah gobolada Koonfureer iyo kuwa dhexe ee dalka ayaa waxaa soo baxeysa qeylo dhaantii ugu xumeed oo ay soo saaraan dadka deegaanka Matabaan iyo deegaanada Hareerihiisa ku yaala ee gobolka Bartamaha Soomaaliya ku yaala ee Hiiraan.
Sida ay xaqiijiyeen wararka ka imanaya Matabaan, deegaankaasi ayaa ay soo gaareen dad aad iyo aad u farabadan oo ka soo barakacay deegaanadadoodii ka dib markii ay saameyn ku yeelatay Abaarta Ba’an ee taagan, waxaana halkaasi ay ku heysataa xaalad nololeed iyo Mid bin aadan nimo.
Maamulka Ahlusuna waljameeca ee ku sugan deegaanadaasi ayaa ugu baaqay Hay’adaha Samafalka iyo ganacsatada Soomaaliyeed in ay dadkaasi la soo gaaraan gar gaar deg deg ah iyagoona sheegay in dadkaasi tabaaleysan ay u badanyhiin Haween, Caruur iyo Dad da’yar ah.
“Matabaan ayaa xiligan waxay tahay deegaan siweyn ay uga jiraan xaalad aad u daran, waxaana ka codsaneynaa cid alaala cidii wax tarikarta dadka tabaaleysan ee ay Abaartu ka soo eriday deegaamadoodii ay la soo gaaran Gar gaar sida ugu dhaqsiyaha Badan” waxaa sidaasi yiri mid ka mid ah odayaasha Deegaankaas.
Sikastaba ha ahaatee dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada Koonfurta iyo Bartamaha dalka ayaa ay siweyn u soo wajahdan abaartan, iyagoona hal haleel ku gaaraya magaalooyinka waaweyn ee dalka si ay uga helaan nolol dhaanta tan ka soo eriday deegaanadii ay ku dhaqnaayeen.